Ubisi lwefomula "Bifidus Semper": Ukwakheka, imiyalelo, ukubuyekezwa
Isikhathi esining impela, omama onyakeni wokuqala wokuphila ibhekene ukuqunjelwa ebantwaneni. Izidakamizwa ezisiza asuse le nkinga, okuningi, kodwa uma isifo kuba amahlala khona, njengoba umthetho, nodokotela bezingane belulekwa ukuba uzame ubisi lwebhodlela ekhethekile "Bifidus Semper". Kuyasiza ukuqeda ukuqunjelwa, usungula izinqubo of kokudla esiswini, kususa amagciwane overgrowth futhi kufanelekile yokudla nsuku zonke.
"Bifidus Semper": Ukwakheka
Ingxube Bifidus brand "Semper" sakhiwa ekhethekile prebiotic - lactulose. Le ngxenye kunomthelela bifidobacteria yemvelo kanye lactobacilli. umthelela omuhle inani wamathumbu ukunyakaza futhi sezinyawo ukungaguquguquki ezinganeni othambekele ukuqunjelwa. Ingxube is asungula ukugaya. Kutfutfukisa futhi normalizes ukulingana microflora emathunjini. Alpha-lactalbumin e ingxube "Bifidus Semper" unethonya elihle ukukhula nokuthuthuka umntwana, polyunsaturated okunamafutha acid zinengxenye ukwakheka kobuchopho futhi iso, ukuthuthukisa engqondweni yethu namakhono imvuthu.
A ezomile ubisi ingxube gluten akhishiwe, izidakamizwa izakhi, kanye nezivimbelakuvunda, colorants kanye namakha. Uhlelo oluyisisekelo oluthi yokwakheka umkhiqizo kuhlanganisa izingxenye ezilandelayo:
whey ngefomu owomile;
zemifino amafutha ezifana entendeni, sunflower, canola, futhi umthombo arachidonic (Mortierella alpine) kanye docosahexaenoic (Crypthecodinium cohnii) acid;
ubisi skimmed powder ;
lactulose kanye lactose;
amavithamini kanye namaminerali;
Ububanzi umugqa "Bifidus"
Ubisi lwefomula for ukuqunjelwa sehlukaniswe ingane ukudla namakani nezinti iziqukathi ephepheni. izindleko kwakamuva ishibhile. Ukuthweswa iziqu imikhiqizo ezomile izingane futhi lobudala, zingabantu:
Kusukela 0 kuya ku-6 izinyanga - "Bifidus Semper 1" (impendulo omama ukusho normalizes ukugaya ngaphakathi kwezinsuku ezingu-1-2).
Kusukela 6 izinyanga ezingu-12 - "Semper Bifidus 2". Isilawuli okwalandela ubisi lwebhodlela for ukuqunjelwa kanye for the ukuzinza we microflora emathunjini.
Bobabili Izingxube zimumethe lactulose. Nokufaka isandla ekuthuthukiseni ka bifidobacteria yabo futhi lactobacilli. Thambisa sezinyawo futhi lula inqubo basishiye. Ziholela i ibhalansi kahle microflora emathunjini. Ukuphumelela "Bifidus Semper" kwafakazelwa izilingo eziningi zokwelapha.
Ukwethulwa ingane ukudla ekudleni
Kakade lapho besanda kuqala ukusetshenziswa avalele ingxube yi lubonakale. Ezinganeni, kwakukhona ukungaguquguquki esihlalweni ethambile kusuka 1 kuya ku-3 izikhathi ngosuku. Ayikho ukuqunjelwa, futhi isimo microflora emathunjini kuthuthukisa ngokuphawulekayo. "Semper Bifidus" non-umlutha futhi kuthinta ingane kamnandi nangokuthula esasile.
Ingxube waqala kancane kancane ukwazi. It buhlanjululwe egabheni ehlukile futhi esikhundleni ngosuku lokuqala "Bifidus" ingxenye eyodwa yokudla. Ngosuku lwesibili yathathelwa indawo inkulumo ethi ukudla okugcwele. Ngaphezu kwalokho, i-inguquko okugcwele ubisi losana we "Semper" yengezwe nsukuzonke oyedwa yokudla. Ngokwesilinganiso, kwathatha entsha uhlobo amandla kuthatha izinsuku 5-6.
Ukuze uvimbele ukuqunjelwa, dysbacteriosis futhi ekulinganiseni emathunjini microflora umsebenzi owodwa noma emibili feedings esikhundleni ngokuphelele ingane ukudla "Semper Bifidus 1, 2". Ngakho, umntwana kufanele fed onyakeni wokuqala wokuphila. Izingane othambekele ukuqunjelwa, kufanele ushintshe yonke kokusuthisa lolu ukudla ukuze kuqiniswa egcwele kwesitulo. Kulokhu, ingxube unika ingane kuze kube kathathu ngosuku. Ngemva ukuzinza we inombolo emathunjini esiqeshini "Bifidus" feedings kancane kancane, okushiya umthamo yesondlo ibalwa ukudla ngamunye.
Amanye amaphuzu asemqoka
Lapho Udla "Bifidus Semper" (incwadi yeziyalezo likuchaza ngokuningiliziwe yonke ezicashile ukulungiselela ingxube), kubalulekile ukugcina inhlanzeko ukuvimbela ukungena isidumbu sengane zonke izinhlobo izifo. Futhi, ukuze alulaze powder ubisi kahle futhi ukulondoloza izakhi, kubalulekile ukuthobela control lokushisa. Amazinga kahle amanzi abilayo ukwenza uqweqwe 36-37 ° C. Ngaphambi sikhonza, hlola isimo ezishisayo we ukudla iconsa kancane ukudla uketshezi kule yesandla.
Lapho ulungiselela ingane ukudla kuyadingeka ukuze asekele ngezabelo efanele yamanzi kanye impuphu. ukungaguquguquki Liquid Akadli ingane ngendlela efanele, ngeke abangele umuzwa satiety, futhi ekugcineni uyakwazi liyochukuluza ukuntula izakhi. Isilinganiso ukudla obukhulu overload isisu namathumbu. Kuyokunikeza i uhlobo ezengeziwe izinso.
"Bifidus Semper": yokusetshenziswa
Inani Daily of mix ezomile izingane phakathi nezinsuku zokuqala eziyishumi zokuphila ibalwa njengoba 2% kusukela ezizalwa zinesisindo esiphansi, siphindwe ngesibalo sezinsuku zokuphila yayo.
Izingane ezindala kuka izinsuku eziyishumi ingxube kwaba "Bifidus Semper" inikezwa olinganise ezilandelayo:
kusukela ezinsukwini 10 izinyanga 2 - 1/5 esisindo yengane, endaweni ethile mayelana 600-800 ml ngosuku;
kusukela 2 kuya 4 izinyanga - 1/6 of the isisindo imvuthuluka, lokhu 800-950 ml ngosuku;
4 kuya ku-6 izinyanga - 1/7 nenqwaba ingane umzimba 900 -1000 ml ngosuku;
phezu 6 izinyanga - 1/8 noma 1/9 of liveweight grudnichka cishe 1000-1100 ml ngosuku.
ukudla alahlwayo engayitholi ibalwa kusukela imfuneko nsuku ingxube, okuyinto ihlukaniswe ngenani feedings.
Kungenzeka ukubala ekudleni nsuku zonke ingane kanye kilojoule. Le ndlela esinembile futhi zilungile. Ngakho, ingane kuze kuphele izinyanga eziyisithupha ubudala akufanele baphuze 115 kcal / kg ngosuku. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha ikhalori ukudla komntwana kancane sinciphise ilingana 110 kcal / kg. Ukuze ukubala inani ukudla nsuku zonke ukuze izinsana, kufanele wazi ukubaluleka ingxube dry in kilojoule. Lokudla okunempilo umzali (webele) ubisi emhlabeni 700 kcal / l. Isinyathelo sokuqala ibalwa mangaki ama-calories ingane kufanele kudle ngosuku. Lesi sibalo ehlukaniswa okuqukethwe kwama-kilojoule elilodwa ilitha ubisi losana. Lesi sibalo okuholela futhi ngeke kuyinsakavukela nsuku zonke.
Umkhiqizo "Bifidus" iboniswe ukusetshenziswa izingane abaphethwe ukuqunjelwa njalo, liphinde kuwufanele ukuthatha ingxube izingane sezinyawo engazinzile, ukuba nokuthambekela sokuzikhulula zaphazamisa. Ncoma ukusetshenziswa kwalesi amandla lapho dysbacteriosis futhi njengoba zokuvimbela yalesi sifo. Odokotela bezingane linqume lo mkhiqizo ngemva inkambo antibiotic ukuze ukuzinza of microflora emathunjini. Sebenzisa "Semper Bifidus 1" nge lactase ukuntula. Faka ekudleni izinsana ne esinqunyiwe ukuntula lactose noma labo ethile ke usevele ekhona emzimbeni. Lokhu ukudla ingane libhekisela ongaphakeme-lactose ubisi Izingxube.
Ukudla kwengane Izindleko
A ingxube "Semper Bifidus 1" (Izibuyekezo bathi umkhiqizo kuyasiza basheshe bamise agayeke izingane) elinesimo ukubaluleka yeningi. Ngakho, ithini emaphaketheni ukuxubana izingane kusukela 0 kuya ku-6 izinyanga futhi 6 kuya ku-12 kukhona esifundeni ruble 550-600 ngamunye 400 amagremu. ingane ukudla intengo asemaphaketheni iphepha ushibhile futhi azungeze 400-500 ruble.
Izibuyekezo ingxube "Semper Bifidus"
Omama abaningi bayabonga le ngxube lokho ukulondolozwa izingane zabo kusukela colic kanye ukuqunjelwa, senginozwela ngesitulo, ukuthuthukisa umsebenzi pheshana emathunjini, wamagciwane dysbiosis. Imiphumela lubonakale ngosuku ingane umsoco yesibili. A ingxube "Bifidus Semper" (Izibuyekezo bathi kuba kuqhathaniswa ezishibhile kuqhathaniswa imikhiqizo efanayo) wasiza ukubuyisela microflora emathunjini bese ukuqeda ubuhlungu esiswini. Kuvame ebekiwe nodokotela bezingane. Bathi ukuthi esiphundu, futhi izingane bayajabula ukudla naye. Uma kungekho izinkinga amathumbu, ulidle akukhuthazwa. Futhi, ngemva ukubuyiselwa omama esihlalweni bazincome kancane kancane ephuma Ukudla kwengane noma alinganiselwe eyodwa yokudla.
Inhlanganisela "Semper Bifidus" (negative impendulo uphawu regurgitation njalo ngemva kokusebenzisa) kuzokuhlupha ukulungiselela, njengoba wazifunela ubisi nokonakala powder ukweluleka ugcwalise lokushisa lamanzi lika-70 ° C. Ngemva kwalokho kube isikhathi esithile kuyadingeka ukuze kuphole amandla ukunikeza ingane. Ububi kubhekwa ibhokisi, Ketha ungakhululekile futhi ukuthi umkhiqizo kunzima ukuthenga ezitolo.
nezigaba ezithile abesifazane uthi ingxube akazange ukuxazulula inkinga ukuqunjelwa, colic futhi kuyoba khona ubuhlungu esiswini, kodwa esebenzisa isihluku kubo kuphela. Abanye omama sihlanganise "Bifidus" nge ingxube kokujwayelekile "Semper" futhi bathi lo inhlanganisela eye yabasiza ukuba bakwazi ukugcwalisa umzimba wengane idinga bifidobacteria nelaphe dysbiosis.
Vasculitis - a lesion isitsha igazi izindonga
Qedela segazi - esiswini esingenalutho noma cha? iseluleko udokotela
Kungani umdlavuza ibizwa ngokuthi umdlavuza? Yini odinga ukuyazi mayelana umdlavuza?
Ingabe Ukwelapha i-ozone Izimo?
Izidakamizwa "Lindaksa": Izibuyekezo
Izimpawu zamarabi kubantu
Yini engcono - i-plasterboard noma i-plaster? Sibheka, siqhathanisa, sikhetha
Uyini papilloma? Ukususa izindlela ekhaya abantu
Indawo yokudlela e Chelyabinsk. "Barbaresco" - yokudlela cuisine European
Yini zohlobo inja ukudla baseKorea
"Indlu Endala" (yaseshashalazini): umlando, irepertoire, igundane, ikheli
Inkulumo ukuphefumula - yini, njani, kungani
Ochwepheshe abanekhono emisebenzini yabantu uyisiqinisekiso sokuchuma kwenkampani
Kuthiwani uma izingcweti zokulala zihlala eduze?
Miracle celandine - Izimo kanye nokwelashwa kwezifo eziningi